ka nanatrehan’ny mpijery Malagasy an’izany ady Boxe Chinoise izany izay nifanandrinan’ny mpikatroka Malagasy sy mpikatroka avy atsy La Réunion. Niaraka taminy tao koa ny ady Boxe Anglaise, K-1, Kick Boxing ary Muay Thai sy ny « demonstration » Jupama sy diamanga Malagasy ary ny fisehoan’ i Christian Randriamalaza tompondaka eran-tanin’ny Boxe Chinoise in-9 ampahibemaso tamin’ny mpitia haiady teto Madagasikara. Raha tsorina dia goragora ny fikarakarana an’ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. Amin’ny ankapobeny, tsy ny taranja Boxe Anglaise ohatra ny eto amintsika no miahy ny Boxe Chinoise any La Réunion fa ny taranja Kick Boxing sy ny Discipline Associée. Anisan’ny nahatara ny fanombohan’ny hetsika ny olana ara-pitsarana sy ny tsy fahatongavan’ny dokotera hanara-maso ny lalao Boxe Chinoise. Ny vokatra azo tamin’ireo iraisam-pirenena 9 lahy sy vavy dia nanjaka tanteraka i La Réunion nahazo fandresena 6, 3 kosa ny fandresena azon’ny Malagasy ka ny 2 tamin’ireo dia fandresena “par forfait” avokoa.